Mpamatsy mpamboly sy ozinina - Mpanamboatra zavamaniry ao Shina
Antsipiriany momba ny vokatra Mpamafy voa mamafy varimbazaha. Afaka misafidy amin'ny 9 ka hatramin'ny 24 andalana ianao. Ny vokatra dia misy zana-kazo, boaty zezika voa, metatra voa iray, fantsom-panafahana zezika, mpanokatra hady ary kodiarana fitotoana. Ny fanaovana zezika, ny zezika, ny zana-kazo ary ny fanabeazana dia azo vitaina indray mandeha. Ny masinina dia mora manitsy, matanjaka ary azo ampiasaina hamafy voa amin'ny antony maro samihafa. Amin'ny alàlan'ny fanitsiana ny tendron'ny angadinomby na kapila, ny voa dia mitovy amin'ny halalin'izy ireo mba hiantohana ny fitomboan'ny tsimokaretina miaraka. Ny ...
Antsipirian'ny vokatra Ity milina mpamboly tongolo lay ity dia azo ampiasaina betsaka amin'ny lemaka sy havoana mba hahatanteraka ny fambolena tongolo lay amin'ny ambaratonga. Amin'ny alàlan'ny fanitsiana ny lohan'ny tongolo lay, dia afaka mahatsapa ny fambolena toerana mitohy. Andinin-kazo maodely famaritana RYGP-4 RYGP-5 RYGP-6 RYGP-7 RYGP-8 RYGP-9 RYGP-10 laharana zana-kazo 4 5 6 7 8 9 10 Hery mifanaraka amin'ny hp 12-20 15-30 18-50 20-60 25-70 25-80 30-90 Sakan'ny asa mm 80 ...